The Rohingya News Bank : ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်
Showing posts with label ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်. Show all posts
သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံထားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီး မှုတွေ ကြုံနေရတာကြောင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြရပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ သတင်းထုတ် ပြန်ချက်ကို အခြေခံပြီး မသိင်္ဂီထိုက် ပြောပြပေးပါမယ်။
Labels: ရိုဟင်ဂျာစခန်း, 2021, mm, Video, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ရေဘေးဒဏ် သင့်နေ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် Rohingya ဒုက္ခသည်များ (ဓာတ်ပုံ - AP)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတောင်ပိုင်းမှာ မုတ်သုန်မိုး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရွာသွန်းတဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် တေ သာင်း လောက်ကို ဘေးလွတ်ရာ နေရာတွေဆီ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအရာရှိတွေက ပြောပါ တယ်။ သီတင်းတပတ်လောက် မိုးပြင်းပြင်းထန်ထန် ရွာနေခဲ့တာကြောင့် မြန်မာနယ်စပ်နားမှာရှိနေတဲ့ ဒုက္ခ သည်စခန်းတွေမှာ ရေကြီး၊ မြေပြိုတဲ့ ဘေးဒဏ်ကို အကြီးအကျယ်ခံနေရပြီး လူ ၁၄ ယောက်ထက် မနည်း သေဆုံးခဲ့သလို စခန်းထဲက ထောင်နဲ့ချီတဲ့ တဲအိမ်တွေ ရေနစ်မြုပ်နေပါတယ်။
Labels: ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်, 2021, mm, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရဘေးဒဏ်သင့်, သတင်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Cox's Bazar က ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ။
ရိုဟင်ဂျာ ပဋိပက္ခအတွက် ရေရှည် ခိုင်မြဲမယ့် ဖြေရှင်းချက် ရရှိရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဦးဆောင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်အရေး အလှူရှင် ညီလာခံမှာ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာကနေ Lisa Schlein ရဲ့ သတင်းဆောင်းပါးကို မသိင်္ဂီထိုက် ပြောပြပါမယ်။
ရန်ပုံငွေ အတွက် ကတိက၀တ် အသစ်တွေ ရနေပေမဲ့လို့လည်း အလှူရှင်တွေဘက်က ဆက်ပြီး မပေးနိုင် တော့မယ့်အရေးကို ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ကောဇ့်ဘဇားက ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ သည်တွေနဲ့ သူတို့ကို လက်ခံထားတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ အတွင်းက လူပေါင်း ၁ ဒသမ ၄ သန်းကို ကူညီ ပေးရေး လိုအပ်တဲ့ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၉၄၃ သန်း မပြည့်မီမှာကို စိုးရိမ်နေကြတာပါ။
Labels: ရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခ, 2021, mm, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း
ဘာဆန်ချာကျွန်းဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုထားဖို့ လုံခြုံတဲ့နေရာလို့ ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရ်ှပြော
■ အမ်ဖန် ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရှ် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်မှာ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမယ့် ဘာဆန်ချာကျွန်းဟာ မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်တဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို ထားဖို့ အလုံခြုံဆုံးနေရာတခု ဖြစ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရှ် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ကယ်ဆယ်‌ရေးဝန်ကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကော့ဆက်ဘဇားခရိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘာဆန်ချာကျွန်း‌ပေါ် ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရ်ှအစိုးရ အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကျွန်းပေါ် ပြောင်းရွှေ့မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်အေဂျင်စီ UNHCR/ ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာအေဂျင်စီ WFP အပါအဝင် NGOs လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်ပြီးဆွေး‌‌နွေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Labels: 2021, en, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဘာဆန်ချာကျွန်း, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ဟိန္ဒူဒုက္ခသည်များကို အမြန်ဆုံး ပြန်ပို့ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထံ မြန်မာ တောင်းဆို
မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တို့ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးနေစဉ် ( / MOFA)
ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဒုက္ခသည်များကို ဆောလျင်စွာပြန်ပို့ပေးရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရထံ မြန်မာအစိုးရက တောင်း ဆိုလိုက် သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသည့် မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်က အွန် လိုင်းမှ တဆင့်ကျင်းပသည့် မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အပြည် ပြည် ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် Mr. Masud Bin Momen အား ပြောကြားလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရအနေနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာသွားသော ဟိန္ဒူ ၄၀၀ ကျော်ကို ပြန်ပို့ပေးရန် ဆန္ဒရှိသော်လည်း ဟိန္ဒူဘာသာ ဝင်များ သီးသန့်ပြန်ပို့ပေးရန် ကိစ္စအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်နေပုံရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီး ဌာန အမြဲတမ်း အတွင်း ဝန် ဦးချမ်းအေးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
Labels: 2021, mm, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, မြန်မာ, သတင်း, ဟိန္ဒူဒုက္ခသည်
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ဇွန်လမှာ ဌာနေပြန်နိုင်ဖို့ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှမျှော်လင့်
၂၀၂၁ ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က မီးလောင်သွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ခိုလှုံနေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရပ်ပြန်ပို့ရေး တတိယအကြိမ်မြောက် ကြိုးပမ်းမှုကို လာမယ့် ဇွန်လထဲမှာ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တာဝန်ရှိသူတွေက မျှော်လင့်နေပါတယ်။ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာပြည်ဖက် ပြန်ပို့ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာပါ။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို နေရပ်ပြန်ပို့ရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ ဆွေးနွေးပွဲတွေ အချိန်အတော်ကြာ ရပ်ဆိုင်းနေခဲ့ရာက တရုတ်အစိုးရရဲ့ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှုနဲ့ ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက်နေ့မှာ အွန်လိုင်းကတဆင့် (၃)နိုင်ငံ ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Labels: 2021, mm, ဌာနေပြန်ရေး, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒုက္ခသည် စခန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘဝ သစ်အတွက် သက်စွန့်ဆံဖျားနဲ့ ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒုက္ခသည် စခန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘဝသစ်အတွက် သက်စွန့်ဆံဖျားနဲ့ ပင်လယ်ရေ ကြောင်း ခရီးနဲ့ မလေးရှားကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်မှာသူတို့ ဘယ်လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသလဲ။ Source : BBC Facebook
Labels: 2021, mm, Video, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာတွေ ပြန်ပို့ရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မြန်မာ တရုတ် ၃ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးမည်
ကုတုပလောင်စခန်းက ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ
ရိုဟင်ဂျာတွေ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မြန်မာ၊ တရုတ် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ မြို့တော် ဒါကာမှာ ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ပြုလုပ်ဖို့ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dr. AK Abdul Momen က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ အစည်းအဝေးဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့် ကြောင်းလည်း သူက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ ဒီသုံးပွင့်ဆိုင် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ဇန်န၀ါရီ လမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် တနှစ်အကြာမှာ ထပ်မံပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၈.၄ သိန်းအမည်စာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံကို စိစစ်အတည်ပြုဖို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ တယ်လို့ ၀န်ကြီး Momen ကဆိုပါတယ်။
Labels: 2021, ၃ ပွင့်ဆိုင်, mm, တရုတ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ နေရပ်ပြန်
ရိုဟင်ဂျာတွေ ပြန်ပို့မယ့်အစီအစဉ် အခုနှစ်အတွင်း စတင် လိုတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစာပို့
ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံပြန့်ပို့မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဒီနှစ်ထဲမှာ စတင်လိုတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အေကေအဗ္ဗဒူမိုမန်က မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆီကို ပေးပို့တဲ့ နှစ်သစ်ဆုတောင်းစာမှာ ထည့်သွင်း ပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာဟာ မိမိတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပြီး အခုနှစ်အတွင်းမှာ ပြန်ပို့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း မိုမန်က ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ် သက်ပြီး နှစ်အတန်ကြာကတည်းက ကြိုးစားနေခဲ့ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆီကို ပေးပို့တဲ့စာထဲမှာ ဒုက္ခ သည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ် စတင်လိုတယ်လို့ ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
Labels: 2021, mm, စာပို့, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ ပြန်ပို့ရေး, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာ ဒုတိယအသုတ်ကို ဘာဆန်ချားကျွန်းဆီ ရွှေ့ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ ပြင်ဆင်
ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၂၀
လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များက ကန့်ကွက်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ရောက်ရှိလာသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ဒုတိယအသုတ်ကို ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်းရှိ ဝေးလံသည့် ဘာဆန်ချားကျွန်းသို့ ပို့ဆောင်နေရာချထား ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တာဝန်ရှိသူများက ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပြောသည်။
လာမည့်ရက် အနည်းငယ်အတွင်း နောက်ထပ် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ ခန့်ကို ဘာဆန်ချားကျွန်းသို့ ပို့မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်လက ဒုက္ခသည် ၁၆၀၀ ကျော်ကို နေရာချထားပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Labels: 2020, mm, ဒုတိယအသုတ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဘာဆန်ချားကျွန်း, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
နောက်ထပ်ရိုဟင်ဂျာ ၁၀၀၀ ကို ကျွန်းတစ်ကျွန်းဆီပို့ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစီစဉ်နေ
Bangladesh is set to moveasecond batch of Rohingya refugees from neighbouring Myanmar to the remote island of Bhasan Char. Source: Anadolu
ဒီလ အစောပိုင်းတုန်းကပဲ ရိုဟင်ဂျာ အယောက်ပေါင်း ၁၆၀၀ ကို အဲဒီကျွန်းဆီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက် ထပ် အယောက် ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်ကို ရက်ပိုင်းအတွင်း ပို့ဆောင်ဖို့ ရှိတယ်လို့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲ အမည်မဖော် လိုတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီလူတွေကို စစ်တကောင်းကို အရင်ပို့ဆောင်ပြီးမှ ဒီရေအတက်အကျအပေါ် မူတည်ပြီး Bhasan Char ကျွန်း ကို ပို့ဆောင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, Bhasan Char Island, mm, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း